COVID-19: Oo loogu talagalay maamulayaasha, shaqaalaha, deganaha abarmintiyaha, iyo deganayaasha bulshada ee la mid ah - King County
Macluumaad ku saabsan COVID-19
Oo loogu talagalay maamulayaasha, shaqaalaha, deganaha abarmintiyaha, iyo deganayaasha bulshada ee la mid ah
Link/share this page: www.kingcounty.gov/covid/housing/somali
1. Maxay tahay inay maareeyayaasha guryaha iyo maareeyayaasha goobta sameeyan?
Ku dhiirrigeli dadka deggan iyo shaqaalaha inay ku celceliyaan fogeynta bulshada, iyo iney dabooshaan wajiga.
Kala fogeynta bulshada ayaa ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan sameyn karno si aan ula dagaalno masiibada.
Ku taageer shaqaalaha ku celcelinta kala jeedinta bulshada. U oggolow shaqaaluhu inay taleefan ku diraan oo ay u istcimaalaan fasax markasta oo ay suurtagal tahay.
Ku dhaji macluumaadka meelaha shaqaalaha, meelaha la wadaago, iyo meelaha laga soo galo ee ku saabsan ficillada qof walba ay tahay inuu qaado si looga hortago faafitaanka COVID-19.
La wadaag macluumaadka ku saabsan COVID-19 deganayaasha oo ku qoran luqado badan. Soo hel Agab ku yaal bogga caafimaadka bulshada
Ku dhiiri geli shaqaalaha, dadka deegaanka, iyo booqdayaasha inay xirtaan wejiga daboolka meelaha ay ka imaan karaan 6 fiit qof uusan la nooleyn. Ka hel Calaamadaha lagu soo dejisan karo luuqado badan websaydka Caafimaadka Dadweynaha.
Maaree isticmaalka Meelaha lawada wadaaggo
Tixgeli xiritaanka aagagga guud ee aan taageerin baahiyaha aasaasiga ah ee dadka deggan, sida qolalka madaddaalada.
Ka digtoonow meelaha caanka ah ee furan, sida meelaha gargaarka xayawaanka lagu bixiyo iyo xawaaraha kombiyuutarka ee la wadaago:
Hubso in shaqaaluhu ama dadka deegaanka deggan ay nadiifiyaan oo ay tirtiraan dhammaan sagxadaha taabashada sare ee u dhexeeya isticmaaleyaasha. Kuwaas waxaa ka mid ah furayaasha, shaashad taabashada, iyo qalabka jimicsiga.
Hubso in shaqaalaha iyo deggeneyaasha ay joogi karaan ugu yaraan 6 fiid meel marwalba inta aad isticmaaleyso meelaha la wadaago. Haddii loo baahdo, xaddid tirada dadka isticmaala aag guud isla waqti isku mid ah. Tixgeli adeegsiga xusuusin muuqaal ah oo ku saabsan kala dheereynta 6-fiit.
Xaddid gelitaanka booqdayaasha. Sii wad inaad u oggolaato booqdayaasha muhiimka ah, sida shaqaalaha daryeelka guriga, shaqaalaha daryeelka caafimaadka, iyo dayactirka degdega ah.
Ku dhiirrigeli dadka deegaanka inay kula xiriiraan ehelka iyo asxaabta taleefanka iyo / ama khadka internetka iyo dib u dhigida booqashooyinka aan muhiimka aheyn.
Haddii ay suurtagal tahay, xaddid marinka booqdaha ee hal meel oo soo gala dhismahaaga oo ay shaqaaluhu si fudud ula socon karaan.
Ku dheji calaamadaha meelaha laga soo galo ee tilmaamaya booqdayaasha lama huraanka ah inay soo galaan haddii ay jiran yihiin ama haddii ay xiriir dhow la leeyihiin qof yeelan kara ama yeeshay COVID-19.
Waxaad dhejisaa calaamadaha u sheegaya dadka booqda inay xaddidaan dhaqdhaqaaqooda dhismaha iyo isticmaalkooda aagagga ay wadaagaan.
Ku samee socdaalo gabi ahaanba, markii ay suuroggal tahay
Samee safarro casri ah oo guryaha iyo guryaha is-kaashatada ah adoo adeegsanaya barnaamijyo ay ka mid yihiin FaceTime ama Google Duo. Haddii taasi aysan ahayn ikhtiyaar, u soo dir sawirrada goobta bannaan ee deggeneyaasha suuragalka ah.
Haddii ay qasab kugu tahay inaad ku sameyso safar qof ahaan ah, Hubso in dadka oo dhami ay kala joogaan ugu yaraan 6 fiid. Ha u ogolaan in kabadan laba qof hal unug markiiba. Tusaale ahaan, u oggolow qofka deggan inuu arko qolalka inta ay shaqaaluhu joogaan bannaanka ama qol kale.
Kahor intaadan sameyn safarka qof-ahaaneed ee qaybta la degan yahay, had iyo jeer ka hel ogolaansho buuxa kireystaha hadda jira. Haddii kiraystuhu diido, u dalxiis safar gebi ahaanba.
La soco tilmaamaha dhismayaasha deegaanka
Laga bilaabo Abriil 24, in la wado dhismaha way banaantahay haddii dhammaan shakhsiyaadka ay kala istagaan ugu yaraan lix fiid. Kormeerayaasha dhismaha waa inay qaadaan tillaabooyin lagu difaacayo shaqaalaha iyo deggeneyaasha labadaba. Halkan ka aqri ah faahfaahin dheeraad (Af ingriis oo kaliya)
La soco caafimaadka shaqaalaha
Waxyaabaha halista siyaadiya waxaa ka mid ah da'da 60 sano iyo wixii ka weyn, xaalad caafimaad oo aad horay u qabtay, haweenka uurka leh iyo jirka difaaca oo daciif noqday. Fadlan maclumuuad dheeri ah halkan ka akhri (Af ingriis oo kaliya)
La xiriir Xarunta Caafimaadka Dadweynaha 'COVID-19 Call Centre' wixii su'aalo ah ee ku saabsan astaamaha iyo waxyaabaha halista ku jira. Saacadaha: 8 AM - 7 PM. Telefoon #: 206-477-3977.
Qaad taxadar hadii aad kiis ku leedahay bulshada deegaankaaga
Haddii aad rumeysan tahay in qof ka tirsan bulshada deegaankaaga uu leeyahay ama yeelan karo COVID-19, qofna ha lawadaagin macluumaadkooda caafimaad ee shaqsiyadeed. Aqoonsiga qofka waa macluumaadka caafimaadka ee la ilaaliyo.
Raac Talooyinka CDC ee ilaalinta shaqaalaha daruuriga ah ee laga yaabo inay ku dhacday COVID-19
Nadiifi oo jeermiska jeermiska u nadiifi. Raac talooyinka (Af ingriis oo kaliya) ku meel gaarka CDC ee loogu talagalay Xarumaha bulshada ee leh kiisas COVID-19 oo la Xaqiijiyay ama laga shakiyay
Haddii aqoonsiga kiiska la yaqaan, soo booqdayaasha iyo shaqaaluhu ma ahan inay galaan waaxda.
Muhiim maahan in looga digayo deggeneyaasha kiisaska suuragalka ah.
2. Mexey tahay inay shaqaalaha dayactirka iyo shaqaalaha kale sameeyaan?
Si joogto ah unadiifi, oo jeermiskana kanadiifi goobaha dadweynaha
Nadiifi dhammaan taabashada-sareeya dhowr jeer maalin kasta, sida albaab-gacmeedka, badhamada wiishashka, badalidda iftiinka, iyo tareenka. Nadiifi oo jeermiska ka nadiifi meelaha banaan (tusaale ahaan, furayaasha iyo qalabka jimicsiga) ka dib isticmaale kasta.
Hubso in gasacadaha qashinka ay u diyaar yihiin unugyada la adeegsaday iyo tuwaalada waraaqaha lagu isticmaalo.
Si nabad doona ooga shaqee qaybaha guryaha la deggan yahay
Xaddidida shaqada dayactirka cutubyada sida ugu macquulsan. Shaqaalaha u baahan inay galaan qaybta dadka deggan waa inay:
Dhaq gacmaha ama isticmaal nadiifiye (oo leh ugu yaraan 60% aalkolo ay ka kooban tahay) kahor intaadan galin. Xiro galoofisyo nadiif ah haddii ay suurtagal tahay.
Ka fogee ugu yaraan 6 fiit masaafad u jirta deggeneyaasha.
Jeermiska ka nadiifi dhammaan goobaha dusha sare ee shaqada ka hor intaadan ka bixin qeybta.
Xiro waji dabool
Xiro daboolka wajiga meel kasta oo aad ku imaan karto 6 fuudh qof aadan la noolayn.
3. Mexey tahay inay daganayaasha sameeyaan?
Ku celcelinta kala fogeynta bulshada
Gurigaaga joog (haddii aadan ahayn shaqaale daruuri ah) sida oogu macquulsan . Gaar ahaan, iska ilaali inaad la xiriirto dadka jiran, oo joog guriga oo ka fogow dadka kale markaad jiran tahay.
Yaree safarada cuntada, gaaska, iyo baahiyaha kale ee reerka.
Haddii ay tahay inaad ka guurto gurigaaga, marwalba ugu yaraan 6 fiit ka fogow dadka kale.
Yaree isticmaalka meelaha caanka ah, sida meelaha xayawaanka lagu daryeelo, sheybaarada kumbuyuutarka, iyo qolalka kaydinta. Kaliya isticmaal meelahaan haddii aad joogi karto ugu yaraan 6 fiit meel u jirta degganeyaasha iyo shaqaalaha waqti kasta.
U xiro maro daboosha wajiga ee meelaha dadweynaha
Xiro maro lagu daboosho wajiga markaad 6 fuudh qof aadan la noolayn u jirto, oo ay ka mid yihiin wiishashka, hoolalka, iyo qolalka dharka lagu dhaqdo wixii macluumaad dheeri ah booqo halkan iyo halkan .Ha u isticmaalin daboolida wejiga wejiga carruurta ka yar da'da 2, qof kasta oo dhibaato ka haysato neefsashada, ama qof kasta oo aan iyagu iska saari karin maaskaro.
Kaliya u oggolow booqdeyaasha bixiya adeegyada daruuriga ah. Tan waxaa ku jira adeegyo aan sugi karin oo aan lagu qaban karin taleefanka ama khadka tooska ah.
Shaqaalaha dhismahaaga waxaa laga filayaa inay qaadaan tillaabooyin lagu difaacayo caafimaadka qof walba. Kuwaas waxaa ka mid ah in adiga iyo dadka kale ee degganba ay kuu jiraan ugu yaraan 6 fiit, in ay gacmahooda maydhaan ama ay istcimaala gacmo nadiifiyaha inta u dhexeysa cutubyada, xidhashada maaskaro, iyo nadiifinta meelaha shaqooyinka ah si joogto ah.
Tixgeli siyaabaha hal abuurka leh ee lagula xiriirin karo dadka kale fog. Adeegso wicitaano taleefan, wicitaano shir, iyo fiidiyowga onlaynka ah ee shaqada, shirarka, iyo inaad la xiriirto asxaabta iyo qoyska.
Ku celceli caadooyinka caafimaadka leh
Ku dhaq gacmaha badanaa saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 sekan. Haddii xarumaha gacma-dhaqidda aan la heli karin, isticmaal gacmo nadiifiye leh ugu yaraan 60% aalkolo ay ku jiraan.
Ka ilaali inaad ku taabato indhahaaga, sankaaga, ama afka gacmo aan dhaqeyn.
Ku dabool afkaaga iyo sankaaga warqad ama tirtiro gacmaha ah markii aad qufacayso ama hindhiseyso.
Ha la wadaagin shay shaqsiyadeed sida dhalada cabitaanka, maacuunta wax lagu cuno, iyo shukumaannada dadka kale.
Si joogto ah u nadiifi dusha sare ee taabashada aqalkaaga
Si joogto ah u nadiifi dusha sare ee taabashada. Tan waxaa ka mid ah taleefannada, batanada, miisaska jikada, musqulaha, tubbada biyaha, armaajooyinka musqulaha iyo Alaabaha meesha laga qabsado. Nadaafadda ayaa waxtar ku leh COVID-19.
Dib u eeg tilmaamaha CDC ee xubnaha qoyska, Gurigaaga Diyaari (Af ingriis oo kaliya)
4. Maxaan sameeya hadii aan umaleeyo in aan qaaday COVID-19?
Deganeyaasha King County waxay kaloo wici karaan Xarunta Caafimaadka Dadweynaha 'COVID-19 Call Centre' oo leh su'aalo ku saabsan astaamaha iyo qodobbada halista. Saacadaha: 8 AM - 7 PM. Telefoon #: 206-477-3977.
Fadlan ogow: Sida ku xusan tilmaamaha CDC, shaqaalaha muhiimka ah sida waardiyeyaasha iyo shaqaalaha daryeelka caafimaadku way sii wadan karaan shaqadooda haddii aysan qaadin atamaaha COVID-19 ama aysan la xiriiran qof laga xaqiijiyay curdurka. Waa in xitaa laga qaado talaabooyin lagu ilaaliyo iyaga iyo bulshada. ah Halkan ka aqri faahfaahin dheeraad (Af ingriis oo kaliya)
5. Kheyraad dheeri ah
Macluumaad dheeri ah iyo hagitaan ku saabsan coronavirus, fadlan tixraac:
Caafimaadka Dadweynaha - Seattle iyo King County (PHSKC)
Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington
Xarumaha Xakamaynta iyo Ka Hortagga Cudurrada (CDC)